प्लाष्टिकबाट डिजेल उत्पादन ! – Janaubhar
प्लाष्टिकबाट डिजेल उत्पादन !
– गणेश ओली
दाङ, पुस १५ । दाङका ‘युवा वैज्ञानिक’ मार्शल रोकाले फालिएका प्लाष्टिकबाट डिजेल उत्पादन गरेका छन् । शहरमा प्लाष्टिकको फोहोर व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको रुपमा रहेको र देशमा डिजल अभाव रहेको बेला उनले प्लाष्टिकबाट डिजेल उत्पादन गरि सफल परीक्षण समेत गरेका हुन् ।
केही समय पहिले सल्लाको खोटोबाट पेट्रोल उत्पादन गरेका उनले केही बर्षदेखि दाङमै बसेर विभिन्न आविष्कार गर्दै आएका छन् । मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले देशमा पेट्रोल र डिजेल अभाव भएको र आउँदो दिनमा समस्याको दिगो समाधान खोजी भइरहेका बेला मार्सलको उत्पादन एउटा विकल्प हुनसक्ने जिल्लाका अगुवाहरुको भनाई छ ।
रोकाले घरेलु प्रविधिमार्फत् डिजेल उत्पादन गरेका हुन् । ‘फालिएका प्लाष्टिकलाई संकलन गरेर सफा गरि मसिनो गरि काट्छौं, उनले भने, ‘चेम्बरमा प्लाष्टिकका टुक्रा राखी त्यसबाट निस्केको धुवाँलाई डिष्टिलेशन विधिबाट लिक्युइड तयार गरिन्छ ।’ सोही लिक्युइडमा विभिन्न केमिकल मिसाएर डिजेल तयार गरिएको मार्सलले बताए ।
बिएसी पहिलो बर्षमा अध्यनरत रोकाको अगुवाईमा विज्ञान लगायत अन्य विषय अध्ययन गर्ने युवाहरुको समूहले बिभिन्न कुराको अध्ययन र आविस्कार गरिरहेको छ । उनीहरुको पछिल्लो ३८ आँै आबिष्कारको रुपमा डिजेल उत्पादन गरी गाडी चलाएर सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ ।
डिजेलको मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्ले, प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कुबेर कडायत, पत्रकार, नागरिक अगुवा लगायतको उपस्थितिमा परीक्षण गरिएको थियो । रोकाले सोही कार्यक्रममा डिजेल उत्पादनबारे जानकारी दिदै एक केजी दुई सय ग्राम प्लाष्टिकबाट एक लिटर डिजेल उत्पादन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
रोकाले आफूहरुले उत्पादन गरेको डिजेल हाल बजारमा भएको डिजेलभन्दा सस्तो र राम्रो भएको पनि दाबी गरेका छन् । हाल घरेलु प्रबिधिबाट डिजेल उत्पादन गरेकाले थोरै उत्पादन गरे पनि सरकारी तथा निजी लगानीकर्ताले व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरे आफूहरुले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
थप लगानी र आधुनिक प्रविधि भए अझै राम्रो काम गर्न सकिने उनीहरुको दाबी छ । सरकारको लागि फोहोर व्यवस्थापनमा प्लाष्टिक निकै चुनौती रहेकोले यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने विकल्प भएकाले यो प्रबिधि राम्रो भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेले बताए । जथाभावी फालिएका प्लाष्टिक संकलन गरेर स्थानीय निकायले डिजेल उत्पादन गरि फोहोर व्यवस्थापन र डिजेल उत्पादन गरे राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सरसफाईमा सहयोग पुग्ने पत्रकार महासंघ दाङका सल्लाहकार सविन प्रियासनले बताए ।
मार्सल रोकाको समूहलाई नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय प्रबिधि महासाखाले सचिव स्तरको निर्णयबाट ग्यासको अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्न सहयोग गरिदिन भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । रोकाको समूहले नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेको ग्यासलाई कसरी सिलिन्डरमा राख्न सकिन्छ भनेर परीक्षण तथा अनुसन्धान पनि गरिरहेको जानकारी दिए ।
यसैगरी उनीहरुले यसअघि सल्लाको खोटोबाट उत्पादन गरेको पेट्रोल नाष्टमा परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिए । नास्टले प्रमाणित ग¥यो भने घरेलु प्रविधि र स्थानीय सामग्रीबाट उत्पादित पेट्रोलको उत्पादन व्यावसायिक रुपमा गर्ने तयारी रहेको रोकाको भनाई छ ।
Prevसल्यान साक्षर जिल्ला घोषणा
Nextवर्षेनी चिसिदैछ दाङ